AHOANA NY FOMBA HAMPIASANA NY PLUTO TV (2021) - MALEMY
Angamba ny hany antony mahatonga ny mpampiasa tsy hatahotra ny sehatra streaming be toa an'i Netflix dia ny drafitra famandrihana lafo. Saingy, ahoana raha sendra tamina rindranasa iray ianao izay nanana sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra an'arivony maimaim-poana. Mety terena ianao tsy hiraharaha an'io ho sangisangy, fa raha ny tena izy dia azo atao amin'ny Pluto TV izany. Raha te hiaina streaming maimaimpoana an-jatony mandritra ny ora maro ianao, ity misy torolàlana iray hanampy anao hahafantatra ny fomba hampiasana ny Pluto TV.
Inona no atao hoe TV Pluto?
Tokony hampihetsika ny fahitalavitra Pluto ve aho?
Fomba 1: ampandehano ny pluto tv amin'ny smartphone
Fomba 2: Fampiasana ny serivisy amin'ny alàlan'ny Chromecast
Fomba 3: Mifandraisa amin'ny Amazon Firestick sy fahitalavitra Smart hafa
Pluto TV dia serivisy streaming OTT mitovy amin'ny Netflix, Amazon Prime, ary Disney Plus. Na izany aza, tsy toy ireo serivisy ireo, Maimaimpoana tanteraka ny Pluto TV ary mamokatra fidiram-bola miorina amin'ny doka. Miaraka amina lohateny mendrika ny binge, ireo sehatra dia manome fantsona fahitalavitra mivantana 100+ ihany koa, manome ny mpampiasa ny traikefa amin'ny fahitalavitra feno. Manampy serizy amin'ny mofomamy, ny fampiharana dia be mpampiasa indrindra ary mora fitetezana ary manome ny mpampiasa safidy hisafidy ny serivisy aloa. Raha toa ka ampy tsara ho anao ireo fiasa ireo dia ity no fomba azonao atao mampifandray Pluto TV amin'ny fitaovanao.
Ny activation amin'ny Pluto TV dia dingana somary sarotra. Amin'ny maha serivisy maimaimpoana azy, Pluto dia tsy mitaky fampahavitrihana handefasana fantsona sy seho . Ny fizotran'ny fampahavitrihana dia ny fampifangaroana fotsiny ny fitaovana maro sy ny fampiasana endri-javatra toy ny seho tiana sy tiana . Hatramin'ny taona vitsivitsy lasa izay, ilaina ny dingana raha toa ka mila mihazakazaka Pluto TV amin'ny fitaovana maro ianao. Rehefa mihazakazaka Pluto TV amin'ny fitaovana vaovao ianao dia hahazo kaody amin'ny kaonty Pluto. Ity kaody ity dia tsy maintsy nampidirina tao amin'ny fitaovanao vaovao hampifanarahana azy roa ireo.
tsy nahomby ny fanavaozana ny fikandrana
Raha vantany vao nomen'ny Pluto TV safidy ho an'ny fisoratana anarana sy hamoronana ny kaontiny manokana ny mpampiasa azy, dia lany andro ilay fiasa fampidirina. Noho izany, ny fampahavitrihana amin'ny Pluto TV dia famoronana kaonty ary fisoratana anarana ho toy ny mpampiasa voamarina.
Ny fampiharana Pluto TV dia azo sintonina avy amin'ny Google Play Store ho an'ny Android sy App Store ho an'ny iPhone. Pluto TV dia rindrambaiko maimaimpoana ary tsy mitaky fomba fampahavitrihana manokana hiasa tsara. Na eo aza izany, afaka mamorona kaonty eo amin'ny lampihazo ianao ary misoratra anarana ho mpampiasa maharitra.
1. Avy amin'ny Play Store, misintona ny Pluto TV fampiharana amin'ny fitaovanao.
ligin'ny angano misintona miadana 2018
2. Sokafy ny fampiharana ary paompy amin'ny Menu fanovana eo amin'ny zorony ambony havanana amin'ny efijery.
3. Mba hampavitrika tanteraka ny Pluto TV, tsindrio ny 'Sign Up for Free.'
Efatra. Ampidiro ny antsipiriany amin'ny pejy manaraka. Ny fizotry ny fisoratana anarana dia tsy mila fampahalalana momba ny carte de crédit, hiantoka anao tsy ho very vola.
5. Vantany vao tafiditra ny fampahalalana rehetra, tsindrio ny 'Sign-up, ary hovelomina ny TV Pluto-nao.
Tsy afaka mifandray amin'ny mpanonta 0x00000002 ny windows
Vakio ihany koa: 9 Fampiharana horonantsary maimaim-poana tsara indrindra
Iray amin'ireo fomba tsara indrindra hampiasana Pluto TV ny fandefasana azy amin'ny alàlan'ny Chromecast anao ary hijerena izany amin'ny fahitalavitrao. Raha manana fitaovana Chromecast ianao ary maniry hankafy fahitalavitra manara-penitra, ity ny fomba ahafahanao mampandeha ny Pluto TV amin'ny alàlan'ny Chromecast.
1. Ao amin'ny browser-nao, mankany amin'ny tranokala ofisialy ny Pluto TV
2. Raha efa namorona kaonty ianao, Hiditra mampiasa ny taratasy fanamarinanao na mampiasa ilay kinova tsy voasoratra.
3. Vantany vao nilalao ny horonan-tsary, tsindrio ireo teboka telo eo amin'ny ilany ankavanan'ny browser Chrome anao.
4. Avy amin'ny lisitry ny safidy miseho, tsindrio ny 'Cast.'
5. Tsindrio ny fitaovana Chromecast anao, ary horonan-tsary avy amin'ny Pluto TV dia hilalao mivantana amin'ny fahitalavitrao.
Raha vantany vao azonao ny fototr'i Pluto TV, dia lasa tsotra be ny fampandehanana azy amin'ny fitaovana rehetra. Azonao atao ny misintona ny fampiharana amin'ny alàlan'ny y ny fahitalavitra Amazon Firestick anay sy fahitalavitra manan-tsaina hafa, ary hiasa tsy misy tohika izy io. Na izany aza, raha tsy mihetsika ny kaontinao Pluto TV amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana fotsiny ary mangataka kaody ny fampiharana dia izao no fomba ahafahanao mampandeha ny Pluto TV amin'ny fitaovanao.
1. Ao amin'ny PC-nao, midina mankany amin'ny Tranonkala Pluto Activation
2. Eto, safidio ny Device te-hampandeha ny Pluto TV ianao.
3. Raha vao voafantina ilay fitaovana, a Hisy kaody 6-digit hiseho eo amin'ny efijeryo.
ny fomba fampitomboana ram amin'ny laptop miaraka usb
4. Miverena amin'ny fahitalavitrao ary, ao anaty tsanganana nomerika foana, ampidiro ny kaody vao nahazo ianao.
5. Ho ianao niditra tao amin'ny kaontinao Pluto TV, ary afaka mankafy ny seho farany farany sy ny sarimihetsika maimaim-poana ianao.
Windows 10 mpanampy fanavaozana nikatona tamin'ny 99
F1. Inona ny bokotra mampihetsika amin'ny Pluto TV?
Ny activation amin'ny Pluto TV dia famoronana kaonty ary fisoratana anarana ho an'ny serivisy. Azonao atao ny mampiasa ny fiasa rehetra amin'ny sehatra amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana miaraka amin'ny kaontinao amin'ny kaonty samihafa.
F2. Ahoana no fomba hampiasana ny Pluto TV amin'ny Roku?
Roku dia iray amin'ireo sehatra Smart TV ho avy izay manohana tambajotram-pifandraisana sy OTT maro karazana. Azonao atao ny misintona ny fampiharana Pluto TV amin'ny Roku ary miditra mba hijerena ireo seho sy horonan-tsary tianao indrindra. Raha tsy izany, azonao atao ny mitsidika an'ity rohy ity: pluto.tv/activate/roku ary ampandehano ny Pluto TV amin'ny Roku amin'ny alàlan'ny kaody 6 isa omena.
Amboary ny laharana tsy misy tohana ao amin'ny Device Device
Fomba 6 hampifandraisana ny telefaona Android amin'ny fahitalavitrao
Ahoana ny fanovana ny karazana NAT amin'ny PC
Ny fampahavitrihana tao amin'ny Pluto TV dia olana efa elaela izay . Na dia nanao dingana marobe aza ny serivisy mba hiantohana ny fampandehanana tsy misy fangarony ho an'ireo mpampiasa azy, maro no tsy afaka mampiasa Pluto TV amin'ny fahaizany avo indrindra. Na izany aza, amin'ireo dingana voalaza etsy ambony ireo dia tokony hiatrika ny ankamaroan'ny olana ianao ary hampiasa mora foana ilay sehatra.
Manantena izahay fa nanampy ity torolàlana ity ary afaka ianareo ampandehano ny Pluto TV . Raha mbola manana fanontaniana momba an'ity lahatsoratra ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra misy ny hevitra.
iTunes tsy afaka nifandray tamin'ity ipad ity dia nisy lesoka tsy fantatra niseho 0xe800002d
tsy afaka namorona fizarazarana vaovao na mitady toerana misy izahay
Windows 10 olan'ny fifandraisana
Windows 10 olana amin'ny fifandraisana Internet
maninona ny windows 10 no very tsy tapaka ny fifandraisana Internet